3D tamin'ny laser fibre nanamarika milina
2D Fibre tamin'ny laser nanamarika milina
Manidina Laser fanamarihana Machine
Class I lasermarking milina
Laser Shinoa Cutting Machine
Alemaina IPG Laser manapaka Machine
CO2 Flying Laser fanamarihana Machine
Gavlo CO2 Laser Cutting * sokitra Machine
UV Laser fanamarihana Machine
3D UV Laser sokitra milina
Exchange ny fianarana
Focus L Asera is a China famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
ny vokatra telo lehibe dia ahitana karazana vokatra dia nanamarika tamin'ny laser fibre milina, tamin'ny laser CO2 manamarika milina sy ny UV tamin'ny laser marika milina. Miorina eo amin'ny izahay tamin'ny laser teknolojia mandroso ho 3D tamin'ny laser fibre sokitra milina (Deep sokitra milina), Dynamic UV sokitra tamin'ny laser milina, mavitrika tamin'ny laser CO2 engaving milina, tamin'ny laser manidina manamarika milina, tamin'ny laser fibre fanapahana milina, tamin'ny laser welding milina sy ny sisa.
Mihoatra ny 20 andian-dahatsoratra. Vokatra sy ny tolotra manokana mba hanome mpanjifa miaraka amin'ny tombony lehibe. Noho ny kalitao avo ny vokatra sy azo antoka fampisehoana, be izy ireo ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika, fitaovana, modely-kevitra, akanjo, kiraro, DOKAMBAROTRA, FANONTANA PRINTY sy fonosana, kilalao-kevitra, ary koa orinasa hafa.
Strict Q uality I nspection For Machine
Mba hiantohana ny kalitao sy ny fahamarinan-toerana ny milina, mifantoka Laser mampiasa ny tena mandroso famokarana sy ny fitiliana fitaovana, anisan'izany ny lasers metatra izay dehibe avy any USA, CNC-mitoto vary milina, scanning fitaratra, AC miova malefaka fahefana emulator miovaova, fifantohana rafitra.
Ary dia mampiasa ny fandrefesana ny thermostat efitra, 3D fitaovana fandrefesana, tamin'ny laser dynamometers, Hafanàm-po an tetezana, sady nandroso fitaovana mba hijerena ny kalitao sy ny fanatanterahana ny orinasa tamin'ny laser fitaovana isaky ny dingana famokarana mba hahazoana antoka ny milina ny kalitao sy mafy orina fampisehoana.
FOCUSLASER manome takatry, faran'izay tsara milina. Noho ny tombony ao Shina, ny soa feno eo amin'ny kalitao sy ny vidiny, manampahaizana filana ny singa manan-danja avy any Alemaina sy Etazonia, Japana, Taiwan sy ny assemblying sy ny orinasa mpamokatra entana any Shina. FOCUSLASER manana ny tsara indrindra famatsian-rojo-rafitra ho an'ny faritra sy ny singa, ary ny mafy orina firaketana ny kalitao sy ny fanavaozana, mba hanaporofoana fa ny 10-taona fampisehoana ny milina.
FOCUSLASER miara-mitondra matihanina talenta sy ny teknolojia, dia manana mpiasa tena mahay. Avy rindrambaiko fampandrosoana ny fitaovana famolavolana, ny rafitra fitiliana, ny tolotra ara-teknika dia Vita ny matihanina sy ny ara-teknika mpiasa.
FOCUSLASER efa nahazo fitaovana sy rindrambaiko 23 Patents amin'ny teknolojia avo-tsaha. Manana ny R & D Feno risi-po sy be traikefa teny amin'ny saha tamin'ny laser ary isika "Hi-Tech Enterprises" any Shina.
Location Ny Lafitsara
Focus Laser ny toerana ara-jeografika dia manome fahafahana be dia be ny vola lany mba hampihenana ny famokarana, amin 'izany hampihenana ny vidin-javatra. FOCUSLASER foibe no misy ao Guangzhou fantatra koa amin'ny hoe Canton 120 km (75 km) any avaratra-avaratrandrefan'i Hong Kong sy 145 km (90 km) avaratr'i Makaô, Guangzhou dia manana tantara Maherin'ny 2.200 taona ary lehibe gara farany ny maritime Silk Road, ary mbola ho toy ny seranan-tsambo lehibe sy ny fitaterana Hub amin'izao fotoana izao, ary koa ny iray amin'ireo telo Shina tanàna lehibe indrindra. Izay manana ny tsara indrindra rafitra mifandraika vokatra azo mora foana ny tena mandroso nampiditra teknolojia sy fitaovana famokarana, ny talenta, ary ny fampiasana-dranomasina isan-karazany sy ny rivotra ny fitaterana, isika dia afaka manome avo-tsara tamin'ny laser fitaovana amin'ny vidiny lafo.
Quality vokatra fampisehoana sy tsara laza, FOCUSLASER vokatra dia tsy nahomby mivarotra any Shina, fa koa no aondrana ho mihoatra ny 90 firenena sy ny faritra eto amin'izao tontolo izao, anisan'izany: Alemaina, Etazonia, Italia, Rosia, Japana, Korea Atsimo, Torkia, Brezila, India, ny Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita sy ireo firenena hafa, ny entana manaiky ho tonga soa lehibe sy ny fiderana. Tsy nankasitraka foana mpanjifa 'hatoky sy ny fanohanana ny FOCUSLASER.
Mba hanolotra ny tsara indrindra sy ny tsara indrindra milina vidiny, ary manome afa-po rehefa avy-varotra fanompoana ny mpanjifa.
Raha mila tsipiriany momba ny tamin'ny laser milina, masìna ianao, aza misalasala ny mifandray aminay